အလှဆုံးတိုက်အိမ် ပိုင်ရှင် သူဌေးမကြီး ဒေါ်ဝိုင်းရဲ့ ကြေကွဲစွာနဲ့ ဘ၀နေ၀င်ချိန်ကို စောင့်မျှော်နေရတဲ့ ဘ၀ – Myanmar News
အလှဆုံးတိုက်အိမ် ပိုင်ရှင် သူဌေးမကြီး ဒေါ်ဝိုင်းရဲ့ ကြေကွဲစွာနဲ့ ဘ၀နေ၀င်ချိန်ကို စောင့်မျှော်နေရတဲ့ ဘ၀
March 20, 2019 - by adminpph - LeaveaComment
အဲဒီအဖွားနာမည်က ဒေါ်ဝိုင်း လို့ခေါ်တယ်..
ငယ်စဉ်တုန်းကတော့ လယ်နဲ့ယာနဲ့တင့်တောင့်တင့်တယ် နေနိုင်တဲ့သူ တောသူဌေးပေါ့လေ..
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ၀န်းကျင်က သူ့အိမ်ဟာ ကျွန်တော့် နယ်မြို့လေးရဲ့ အလှဆုံးနဲ့ ပထမဆုံးသော တိုက်အိမ်ပဲ..မှန်တွေတပ်ထားတဲ့ သူ့အိမ်ပြတင်းပေါက်တွေကို တစ်မြို့လုံးကလူတွေ အထူးအဆန်းလုပ်ပြီး သွားကြည့်ကြတာကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေသေးတယ်..
သူ့မှာ မောင်မိုးနဲ့ မအေးဆိုတဲ့ သားသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်..စီးပွားရေးလေးက အတန်ငယ်ပြေလည်တော့ သားနဲ့သမီးကို အရမ်းအလိုလိုက်တာ..
ယောက်ျားကလည်း လူအေးတစ်ယောက်ဆိုတော့ လယ်လေးလုပ်လိုက် တရားလေးထိုင်လိုက်နဲ့ တစ်နေကုန်တောင် စကားတစ်လုံးမပြောတဲ့သူမျိုး..သားသမီးကို စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့မချစ်တတ်တော့ နှစ် သလိုဖြစ်ပြီး သူ့သားနဲ့သမီး ဆိုးချက်ဆိုတာ ကမ်းကုန်တယ်ပြောရမယ်..
အမေက အလိုလိုက် အဖေက လူအေးဆိုတော့ သောင်းကျန်းချင်တိုင်းသောင်းကျန်းတယ်ဆိုတာလေ..မိဘကို ငယ်ပါနဲ့နှုင်းပြီးဆဲတယ်ဆိုတာကတော့ မနက်တိုင်းကြားရလို့ ရိုးနေပြီ..
စိတ်မထင်ရင် မထင်သလို မအေကို ပါးလေးနားလေး ရိုက်တတ်သေးတယ်..
ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့ ဒေါ်ဝိုင်းရဲ့ ခင်ပွန်း ကိုလူအေးကြီး ဆုံးပါလေရော..
ပထမတစ်နှစ် နှစ်နှစ်တော့ အခြေသိပ်မပျက်ဘူး..သုံး လေး နှစ်လောက်လည်းကြာရော ဟိုလူကလိမ်ဒီလူကလိမ် ၊ သားက အရက်သမား ၊ သမီးက ဖဲသမားဆိုတော့ရှိတဲ့လယ်တွေရောင်းလိုက်ရတယ်..အဲဒီမှာ မအေကြီးငုတ်တုတ်ရှိရက်သားကို သားနဲ့သမီးက အမွေတောင်းတော့တာပဲ..
ရပ်ကွက်က ရပ်မိရပ်ဖတွေ တားနေတဲ့ကြားက ဒေါ်ဝိုင်းကြီးတစ်ယောက် အိမ်နဲ့ခြံကိုရောင်းပြီး သားနဲ့သမီးကို အမွေခွဲပေးလိုက်တယ်..
နောက်တစ်နေ့မှာပဲ ငွေထုတ်ပိုက်ပြီး သားနဲ့သမီးက တစ်ခြားမြို့ကိုပြောင်းသွားပါလေရော..
ပထမတော့ သားရှိတဲ့မြို့ သမီးရှိတဲ့မြို့တွေမှာ တစ်လှည့်စီ လိုက်နေသေးတယ်..
သားအလိမ္မာတုံးလေးက မူးလာတိုင်း အမေအိုကြီးကို လက်သီးစာ ခြေထောက်စာလေး ကျွေးနေလေတော့ ဒဏ်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီး သမီးရှိတဲ့မြို့ကိုတစ်လှည့်သွားနေတာပေါ့..
သမီးအလိမ္မာလေးကလည်း ညညဖဲဝိုင်းမှာ ဒီအဖွားကြီးကဘုရားအကျယ်ကြီးရှိခိုးလို့ နားညည်းတယ်ဆိုပြီးဖဲဝိုင်းရှိတဲ့ညတိုင်း အမေအိုကြီးကို အိမ်အပြင်ခြံထောင့်က ကုက္ကိုပင်အောက်မှာ ဖျာခင်းပြီး အိပ်ခိုင်းတယ်..
ဆောင်းတွင်းဆိုတော့ ဒေါ်ဝိုင်းတစ်ယောက် ၁ ပတ်လောက်နဲ့ အောက်ပိုင်းချိပြီး လမ်းမလျောက်နိုင်တော့ဘူး.
ဒါက ဒေါ်ဝိုင်းဆိုတဲ့ အဖွားကြီး ရဲ့ ကိုယ်ရေး အကျဉ်းဆိုပါတော့..
ကျွန်တော် သူ့ကိုပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာ သူ့မျက်လုံး နှစ်ဖက်လုံးကွယ်နေပြီ..သားနဲ့သမီးရှိတဲ့ မြို့ကနေ သူ့ဇာတိကျွန်တော်တို့မြို့လေးဆီပြန်လာပြီး တုတ်ကောက်တစ်ချောင်းအားပြုလို့ ကြွပ်ကြွပ်အိပ်အနက်ရောင်အထုပ်လေးတစ်ထုပ်ကို ခါးမှာချည်ပြီး ဟိုလူ့အိမ်ကထမင်းတောင်း ဒီလူ့အိမ်ကဟင်းလေးတောင်နဲ့ ဘ၀နေ၀င်ချိန်ကို ဆင်းရဲကြီးစွာဖြတ်သန်းနေရတယ်..
တစ်နေ့တော့ လမ်းဘေးမှာလဲနေတဲ့ ဒေါ်ဝိုင်းကို ဘိုးဘွားရိပ်သာပို့ဖို့ရပ်ကွက်ကလူတွေက ကျွန်တော့်ကို တာဝန်ပေးတယ်..
မျက်စိကမမြင် ခြေထောက်ကမသန် အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်နေရှာတဲ့သူ့အတွက် အဆင်ပြေမယ့်ဘိုးဘွားရိပ်သာလေးတစ်ခုကို ရှာပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လိုက်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်..
ဘိုးဘွားရိပ်သာကိုရောက်တော့ နာယကဆရာတော်ဆီမှာခွင့်ပန်ပြီး ဒေါ်ဝိုင်းကို အဖွားဆောင်မှာနေရာပေးတယ်..
သူ့ ခါးမှာ ကြိုးနဲ့ ကျစ်နေအောင် အမြဲချည်ထားတဲ့ ကြွပ်ကြွပ်အိပ်အနက်ရောင်လေးကို ကျွန်တော်ကယူပြီးသူအိပ်ရမယ့် ကုတင်ခြေရင်းက သေတ္တာလေးထဲ ပြောင်းထည့်ပေးတာပေါ့..
ယောဂီထမီ အဟောင်းတစ်ထည် ညစ်နွမ်းနွမ်း သဘက်တစ်ထည်အဖာရာ ဗလပွနဲ့ အနွေးထည်တစ်ထည်ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်တစ်စုံတစ်ရာကို လိပ်ထားတဲ့ လက်ကိုင်ပုဝါလေးတစ်ခု..စုစုပေါင်းပစ္စည်း ငါးမျိုး ထွက်လာတယ်..
လက်ကိုင်ပုဝါလေးထဲမှာ ဘာများပါလို့ ဒီလောက်တရိုတသေ သိမ်းထားတာပါလိမ့်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဖြေကြည့်လိုက်တဲ့အခါ..
သူ့အပေါ် ဘ၀တစ်သက်တာလုံး နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ သူ့ဘ၀ကို သူတောင်းစား သာသာဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ သူ့ဘ၀နေ၀င်ချိန်ကို အားကိုးရာမဲ့အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ သူ့ သားနဲ့ သမီးရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်..
ကျွန်တော်လေ ရင်စို့သွားလိုက်တာ ဆိုတာ..
မိဘ မေတ္တာ ..မိဘမေတ္တာ..စာဖွဲ့စရာ စကားလုံးမရှိဘူးဆိုတာ သိပ်မှန်တာပဲ..ကျွန်တော်တွေးတယ် …
သူကမျက်မမြင်တစ်ယောက် ဖြစ်နေပြီလေ..ဒီဓာတ်ပုံကို သူသိမ်းထားတော့ရော မြင်ရပါ့မလား..မြင်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်..နော်..
ဒီဓာတ်ပုံကို အဖွားအိုဟာမိခင်မေတ္တာအလင်းနဲ့ ကြည့်ပြီး ခံစားမြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်..
ပစ္စည်းလေးတွေကို သေတ္တာထဲ စီစီရီရီထည့်ပြီးကျွန်တော်ပြန်မလို့ သူ့ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်..
“အဖွား ကျွန်တော် ပြန်တော့နော်..”
ကျွန်တော်လှည့်ထွက်လာတဲ့အခါ အဖွားဝိုင်းကကျွန်တော့်ကို လှမ်းခေါ်တယ်..
“လူလေးရေ..လူလေး..အဖွားသားနဲ့သမီး ကိုမိုးနဲ့ မအေး က အဖွားကိုလာရှာရင်အဖွားဒီရောက်နေတယ်လို့ လမ်းညွှန်လိုက်ပါအုံးနော်..”
ဘာအဖြေမှ ပြန်မပေးဘဲ ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ဆက်လျောက်လာခဲ့တယ်..
ဘိုးဘွားရိပ်သာတစ်ခုရဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ ပျင်းရိငြီးငွေ့စွာနဲ့ ထိုင်လိုက် အိပ်လိုက် လုပ်နေရင်း ….
ဘယ်တော့မှ လာတွေ့မှာမဟုတ်တဲ့ သားနဲ့သမီးကို မျှော်လင့်ခြင်းကြီးစွာ စောင့်နေရင်း …
လက်ကိုင်ပုဝါလေးထဲက သားနဲ့သမီးဓာတ်ပုံကိုကန်းနေတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ အလွမ်းပြေကြည့်ရင်း..အဖွားအိုတစ်ယောက်ဟာ …ဘ၀နေ၀င်ချိန်ကို စောင့်မျှော်ဖြတ်သန်းနေလေရဲ့..။….။….။
All Credit goes to zaw zaw and thank you.
Unicode version အလှဆုံးတိုကျအိမျ ပိုငျရှငျ သူဌေးမကွီး ဒျေါဝိုငျးရဲ့ ကွကှေဲစှာနဲ့ ဘဝနဝေငျခြိနျကို စောငျ့မြှျောနရေတဲ့ ဘဝ
အဲဒီအဖှားနာမညျက ဒျေါဝိုငျး လို့ချေါတယျ..
ငယျစဉျတုနျးကတော့ လယျနဲ့ယာနဲ့တငျ့တောငျ့တငျ့တယျ နနေိုငျတဲ့သူ တောသူဌေးပေါ့လေ..
လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး ၃၀ ၀နျးကငျြက သူ့အိမျဟာ ကြှနျတေျာ့ နယျမွို့လေးရဲ့ အလှဆုံးနဲ့ ပထမဆုံးသော တိုကျအိမျပဲ..မှနျတှတေပျထားတဲ့ သူ့အိမျပွတငျးပေါကျတှကေို တဈမွို့လုံးကလူတှေ အထူးအဆနျးလုပျပွီး သှားကွညျ့ကွတာကိုကြှနျတျောမှတျမိနသေေးတယျ..
သူ့မှာ မောငျမိုးနဲ့ မအေးဆိုတဲ့ သားသမီးနှဈယောကျရှိတယျ..စီးပှားရေးလေးက အတနျငယျပွလေညျတော့ သားနဲ့သမီးကို အရမျးအလိုလိုကျတာ..
ယောကျြားကလညျး လူအေးတဈယောကျဆိုတော့ လယျလေးလုပျလိုကျ တရားလေးထိုငျလိုကျနဲ့ တဈနကေုနျတောငျ စကားတဈလုံးမပွောတဲ့သူမြိုး..သားသမီးကို စညျးနဲ့ကမျးနဲ့မခဈြတတျတော့ နှဈ သလိုဖွဈပွီး သူ့သားနဲ့သမီး ဆိုးခကျြဆိုတာ ကမျးကုနျတယျပွောရမယျ..
အမကေ အလိုလိုကျ အဖကေ လူအေးဆိုတော့ သောငျးကနျြးခငျြတိုငျးသောငျးကနျြးတယျဆိုတာလေ..မိဘကို ငယျပါနဲ့နှုငျးပွီးဆဲတယျဆိုတာကတော့ မနကျတိုငျးကွားရလို့ ရိုးနပွေီ..
စိတျမထငျရငျ မထငျသလို မအကေို ပါးလေးနားလေး ရိုကျတတျသေးတယျ..
ဒီလိုနဲ့ တဈနေ့ ဒျေါဝိုငျးရဲ့ ခငျပှနျး ကိုလူအေးကွီး ဆုံးပါလရေော..
ပထမတဈနှဈ နှဈနှဈတော့ အခွသေိပျမပကျြဘူး..သုံး လေး နှဈလောကျလညျးကွာရော ဟိုလူကလိမျဒီလူကလိမျ ၊ သားက အရကျသမား ၊ သမီးက ဖဲသမားဆိုတော့ရှိတဲ့လယျတှရေောငျးလိုကျရတယျ..အဲဒီမှာ မအကွေီးငုတျတုတျရှိရကျသားကို သားနဲ့သမီးက အမှတေောငျးတော့တာပဲ..
ရပျကှကျက ရပျမိရပျဖတှေ တားနတေဲ့ကွားက ဒျေါဝိုငျးကွီးတဈယောကျ အိမျနဲ့ခွံကိုရောငျးပွီး သားနဲ့သမီးကို အမှခှေဲပေးလိုကျတယျ..
နောကျတဈနမှေ့ာပဲ ငှထေုတျပိုကျပွီး သားနဲ့သမီးက တဈခွားမွို့ကိုပွောငျးသှားပါလရေော..
ပထမတော့ သားရှိတဲ့မွို့ သမီးရှိတဲ့မွို့တှမှော တဈလှညျ့စီ လိုကျနသေေးတယျ..
သားအလိမ်မာတုံးလေးက မူးလာတိုငျး အမအေိုကွီးကို လကျသီးစာ ခွထေောကျစာလေး ကြှေးနလေတေော့ ဒဏျမခံနိုငျဘူးဆိုပွီး သမီးရှိတဲ့မွို့ကိုတဈလှညျ့သှားနတောပေါ့..
သမီးအလိမ်မာလေးကလညျး ညညဖဲဝိုငျးမှာ ဒီအဖှားကွီးကဘုရားအကယျြကွီးရှိခိုးလို့ နားညညျးတယျဆိုပွီးဖဲဝိုငျးရှိတဲ့ညတိုငျး အမအေိုကွီးကို အိမျအပွငျခွံထောငျ့က ကုက်ကိုပငျအောကျမှာ ဖြာခငျးပွီး အိပျခိုငျးတယျ..
ဆောငျးတှငျးဆိုတော့ ဒျေါဝိုငျးတဈယောကျ ၁ ပတျလောကျနဲ့ အောကျပိုငျးခြိပွီး လမျးမလြောကျနိုငျတော့ဘူး.
ဒါက ဒျေါဝိုငျးဆိုတဲ့ အဖှားကွီး ရဲ့ ကိုယျရေး အကဉျြးဆိုပါတော့..
ကြှနျတျော သူ့ကိုပွနျတှတေဲ့အခြိနျမှာ သူ့မကျြလုံး နှဈဖကျလုံးကှယျနပွေီ..သားနဲ့သမီးရှိတဲ့ မွို့ကနေ သူ့ဇာတိကြှနျတျောတို့မွို့လေးဆီပွနျလာပွီး တုတျကောကျတဈခြောငျးအားပွုလို့ ကွှပျကွှပျအိပျအနကျရောငျအထုပျလေးတဈထုပျကို ခါးမှာခညျြပွီး ဟိုလူ့အိမျကထမငျးတောငျး ဒီလူ့အိမျကဟငျးလေးတောငျနဲ့ ဘဝနဝေငျခြိနျကို ဆငျးရဲကွီးစှာဖွတျသနျးနရေတယျ..
တဈနတေ့ော့ လမျးဘေးမှာလဲနတေဲ့ ဒျေါဝိုငျးကို ဘိုးဘှားရိပျသာပို့ဖို့ရပျကှကျကလူတှကေ ကြှနျတေျာ့ကို တာဝနျပေးတယျ..
မကျြစိကမမွငျ ခွထေောကျကမသနျ အိုမငျးမစှမျးဖွဈနရှောတဲ့သူ့အတှကျ အဆငျပွမေယျ့ဘိုးဘှားရိပျသာလေးတဈခုကို ရှာပွီးကြှနျတျောကိုယျတိုငျ လိုကျပို့ပေးခဲ့ပါတယျ..
ဘိုးဘှားရိပျသာကိုရောကျတော့ နာယကဆရာတျောဆီမှာခှငျ့ပနျပွီး ဒျေါဝိုငျးကို အဖှားဆောငျမှာနရောပေးတယျ..
သူ့ ခါးမှာ ကွိုးနဲ့ ကဈြနအေောငျ အမွဲခညျြထားတဲ့ ကွှပျကွှပျအိပျအနကျရောငျလေးကို ကြှနျတျောကယူပွီးသူအိပျရမယျ့ ကုတငျခွရေငျးက သတ်ေတာလေးထဲ ပွောငျးထညျ့ပေးတာပေါ့..
ယောဂီထမီ အဟောငျးတဈထညျ ညဈနှမျးနှမျး သဘကျတဈထညျအဖာရာ ဗလပှနဲ့ အနှေးထညျတဈထညျပနျးကနျပွားတဈခပျြတဈစုံတဈရာကို လိပျထားတဲ့ လကျကိုငျပုဝါလေးတဈခု..စုစုပေါငျးပစ်စညျး ငါးမြိုး ထှကျလာတယျ..
လကျကိုငျပုဝါလေးထဲမှာ ဘာမြားပါလို့ ဒီလောကျတရိုတသေ သိမျးထားတာပါလိမျ့ဆိုပွီးကြှနျတျောဖွကွေညျ့လိုကျတဲ့အခါ..
သူ့အပျေါ ဘဝတဈသကျတာလုံး နှိပျစကျခဲ့တဲ့ သူ့ဘဝကို သူတောငျးစား သာသာဖွဈအောငျ လုပျခဲ့တဲ့ သူ့ဘဝနဝေငျခြိနျကို အားကိုးရာမဲ့အောငျလုပျခဲ့တဲ့ သူ့ သားနဲ့ သမီးရဲ့ ဓာတျပုံလေးထှကျလာခဲ့ပါတယျ..
ကြှနျတျောလေ ရငျစို့သှားလိုကျတာ ဆိုတာ..
မိဘ မတ်ေတာ ..မိဘမတ်ေတာ..စာဖှဲ့စရာ စကားလုံးမရှိဘူးဆိုတာ သိပျမှနျတာပဲ..ကြှနျတျောတှေးတယျ …
သူကမကျြမမွငျတဈယောကျ ဖွဈနပွေီလေ..ဒီဓာတျပုံကို သူသိမျးထားတော့ရော မွငျရပါ့မလား..မွငျနိုငျလိမျ့မယျထငျပါတယျ..နျော..
ဒီဓာတျပုံကို အဖှားအိုဟာမိခငျမတ်ေတာအလငျးနဲ့ ကွညျ့ပွီး ခံစားမွငျနိုငျပါလိမျ့မယျ..
ပစ်စညျးလေးတှကေို သတ်ေတာထဲ စီစီရီရီထညျ့ပွီးကြှနျတျောပွနျမလို့ သူ့ကိုနှုတျဆကျလိုကျတယျ..
“အဖှား ကြှနျတျော ပွနျတော့နျော..”
ကြှနျတျောလှညျ့ထှကျလာတဲ့အခါ အဖှားဝိုငျးကကြှနျတေျာ့ကို လှမျးချေါတယျ..
“လူလေးရေ..လူလေး..အဖှားသားနဲ့သမီး ကိုမိုးနဲ့ မအေး က အဖှားကိုလာရှာရငျအဖှားဒီရောကျနတေယျလို့ လမျးညှနျလိုကျပါအုံးနျော..”
ဘာအဖွမှေ ပွနျမပေးဘဲ ကြှနျတျော စိတျမကောငျးစှာနဲ့ ဆကျလြောကျလာခဲ့တယျ..
ဘိုးဘှားရိပျသာတဈခုရဲ့ ကုတငျပျေါမှာ ပငျြးရိငွီးငှစှေ့ာနဲ့ ထိုငျလိုကျ အိပျလိုကျ လုပျနရေငျး ….
ဘယျတော့မှ လာတှမှေ့ာမဟုတျတဲ့ သားနဲ့သမီးကို မြှျောလငျ့ခွငျးကွီးစှာ စောငျ့နရေငျး …
လကျကိုငျပုဝါလေးထဲက သားနဲ့သမီးဓာတျပုံကိုကနျးနတေဲ့ မကျြလုံးတှနေဲ့ အလှမျးပွကွေညျ့ရငျး..အဖှားအိုတဈယောကျဟာ …ဘဝနဝေငျခြိနျကို စောငျ့မြှျောဖွတျသနျးနလေရေဲ့..။….။….။
Previous Article ဆေးဆိုးစရာမလိုပဲ ဆံပင်ဖြူတွေ သဘာဝအတိုင်း ပြန်နက်စေဖို့
Next Article နို့ဆီက နွားနို့ က ရတာမဟုတ်ဘူးနော်… စားအုန်းဆီက ရတာတဲ့…. ဟုတ်လို့လား……။ အသံတိတ်လူသတ်သမားတဲ့…